Budata Now Escape APK maka Android
Budata Now Escape
Free Budata maka Android (22.00 MB)
Budata Now Escape,
Ugbu a Escape bụ egwuregwu gam akporo nwere ihe onyonyo ụdị neon nke na-atọ ụtọ igwu egwu nobere nha. Negwuregwu nke chọrọ iche echiche ngwa ngwa na ime ihe, anyị na-agbasi mbọ ike ịlanarị site niwepụ ihe mgbochi ndị na-amalite ịkwaga mgbe anyị na-abịaru nso.
Ọ na-egbochi ọdịiche dị na egwuregwu ndị yiri ya nke anyị na-aga nihu mgbe niile. Ihe mgbochi etinyere nọnọdụ dị iche iche ka anyị nwee ike ịga nihu nụzọ dị mfe adịghị edozi ma ọ bụ ibughari. Anyị enweghị ohere ịhụ ihe mgbochi ndị ahụ nihu ma gbanwee ntụziaka anyị nihi ya, nihi na mgbe anyị rutere nso na ihe mgbochi ahụ, ha na-amalite ịkwagharị ma ọ bụghị ebe ọ bụla na otú ha ga-esi gaa. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume iji uru nke ịdị ntakịrị ntakịrị gafere, ọ dịghị mfe.
Now Escape Ụdịdị
Nha faịlụ: 22.00 MB
Mmepụta: cherrypick games